NORWAY: Gabar soomaaliyeed oo cunsuriyad kala kulantay maamule shirkad farmashiiye oo ay shaqo ka dalbatay – Calanka.com
NORWAY: Gabar soomaaliyeed oo cunsuriyad kala kulantay maamule shirkad farmashiiye oo ay shaqo ka dalbatay
Iido Aadan oo 26 jur ah islamarkaana asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya ayaa dhacdo cunsuriyad ah kala kulantay maamule shirkad farmashiiye oo ay shaqo ka dalbatay kaas oo wareysi uu la lagaa ku yiri in uusan la dhacsaneyn shaqada soomaalida, sababo la xiriira aragti xun oo dhanka shada ah oo uu ka qabo.
Shirkadda farmashiye ayaa lagu magacaabaa Vitusapotek, waxaana ay dhacdadani ka dhacday degmada Stovner ee gobolka Oslo.
Iido ayaa sheegtay in wareysiga dhanka shaqada uu ku socday si wanaagsan ilaa uu maamulaha ka weydiiyo gabagabadii waddanka ay asal ahaan kasoo jeedo, markii ay u sheegtayna uu hadaladan cunsuriyadda ah kula hadlay.
Markii ay u adkeysan weysay ayay ka kacday fadhiga, waxaana uu maamulaha u raaciyay in uu wax badan sii dhihi rabay balse uu meesha ku ekeynayo maadaama ay carootay, ayna ilmeysay.
Waxa ay ku tiri Iido maamulaha in uusan dadka hal shanlo uusan wada gelin, islamarkaana dadku ay kala duwan yihiin.
Maamulka sare ee Vitusapotek ayaa qoraal ay kaga ralligelinayaan dhacdadanai soo saaray kadib markii ay baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha ay wada qabsatay, waxaana ay sheegeen in ay ka xunyihiin waxa dhacay ayna baarayaan.